भाइरल बाबु छोरीको अनौठो प्रेम, सैलिनलाई गायिका बनाउने संजितको सपना ( भिडियो ) – Samacharpati
भाइरल बाबु छोरीको अनौठो प्रेम, सैलिनलाई गायिका बनाउने संजितको सपना ( भिडियो )
काठमाडौं, १ असार । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरु चर्चामा आउने क्रम जारी छ । यसैक्रममा यतिबेला युटुब (सोसल मिडिया ) मा एक बच्ची र उनको बाबु निकै भाइरल बनिरहेका छन् सानी बच्ची २ वर्ष ५ महिनाकी मात्र छिन । जसको नाम संजित श्रेष्ठ र उनको छोरी यानिकी सानी बच्चीको नाम सैलिन श्रेष्ठ हो ।
सोसल मिडियामा दिनदिनै भारल बनिरहेका यी बाबु छोरीको भिडियो सधैव सामाजिक संजालमा अपलोड गरिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले यसो रमाइलोको लागि भनेर सो भिडियोहरु बनाउदै गएको बताए । उनले कुनैपनि कुरा नसोची कुनै कन्सेप्ट बिनानै आफु अघि बढ्दै गएको र यहिँ गर्छु यस्तो नै बनाउछु भनेर आफुले नसोचेको बताए ।
सानी सैलिन निकै चन्चले स्वभावकी छिन । उनि बाबुको प्यारी छोरी हुन् । उनले बाबाले भनेको हरेक कुरा मान्ने गर्छिन । यतिमात्र नभएर उनि मिडियामाझ बोल्न पनि बाबुले भन्नु पर्ने रहेको छ । सानो बच्चाहरुले अत्याधिक प्रश्न गर्ने गर्छन र सबैको बच्चा निकै चन्न्चले हुने, धेरै चकचक गर्ने खाल्को हुन्छन तर आफ्नो बच्चाचाहि त्यस्तो नहोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको श्रेष्ठले बताए ।
स्कुल जाने उमेर समेत नभएकी सैलिनले २ बर्षको उमेरमै सामान्य बच्चाले स्कुलमा सिक्नु पर्ने कुरा क, ख देखि ए, बी,सी लगाएतका कुराहरु अहिलेनै सिकी सकेकी उनका बाबुले बताएका छन् । उनले छोरीलाई भविष्यमा गएर यहिँनै बनाउछु भन्ने छैन तर सामान्य गीत गाउने होस् र बानी , बोली चाली लगायत राम्रो होस् एउटा देशको असल नागरिक बनोस भन्ने आफ्नो चाहाना रहेको बताए । बाकी भिडियोमा हेर्नुहोस
कुमार र अनुपा समातिए पछि नकुलकी आमा मिडियामा, नेपाल आएपछि यसरी स्वागत गर्ने आमाको तयारी
लक्ष्मी काण्डमा नयाँ खुलासा : ढोका खोलेर भित्र पस्दा यस्तो देखियो ! खाट मुनि के हो यो ?
हेर्दै अचम्म, माटो विना पानीमा तरकारी खेती ! घरको छतमै घना जंगल (भिडियो)
“नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश” is locked नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो भारतले लिपुलेकमा किन लोभ गर्दैछ ? हेर्नुहोस यस्तो छ खास कारण, डा. दिल बहादुर क्षेत्रीको यस्तो आक्रोश
रोटरी पोखरा फिस्टेलमा थापा रोट्रयाक्ट पोखरा फिस्टेलमा सुनार
मोटोपन धेरै भएका व्यक्तिहरुमा क्यान्सरको जोखिम, जोखिम कम गर्न अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय
कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनका लागि रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईकाे नाम सिफारिश